“SlowMov” : tetikasa sôsialy manome dika iray hafa ny fotoana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Noelle Ferrara - Aboya
Voadika ny 27 Desambra 2019 18:13 GMT
Fiomanana ho amin'ny sakafo hariva itambarambe. Pejy Facebook an'ny Disco Soupe. nahazoana alàlana.
Ny SlowMov [hetsika miadana] dia habaka virtoaly, ary ato ho ato dia ho tena izy, mampivondrona ireo hetsika santatra mikendry ny hametraka ny fotoana ho zavatra izay tena sarobidy sy tsy misy ifandraisany amin'ireo fisainana miiba toy ny hakamoana, ny tsy firaharahiana na ny tsy fitandremana. Ny taharo rehetra, ny torohay rehetra ary ny tetikasa rehetra izay manasa anao mba hanalefaka ny gadona mitrifan'ny taty aorian'ny fanovàna ho maoderina dia afaka hahita ny toerany ao anatin'io sehatra io.
Ilay tetikasa dia tafiditra ao anatin'ilay Movimiento Slow [hetsika miadana] malaza, teraka tamin'ny 1986 ho setrin'ny nisokafan'ilay “fast-food” malaza teo amin'ny kianjan'i Espaina ao Rôma. Tany am-boalohany dia nifantoka betsaka tamin'ny sakafo, fa vetivety foana dia nitatra ho amin'ny sampana hafa toy ny fanabeazana, ny fahasalamàna, ny asa ary ny fialamboly. Roapolo taona taty aoriana, nanomboka nahazo laka io filôzôfia io tao Eoropa ary ahitàna hetsika santatra maromaro any aminà tanàndehibe maro ao amin'io tanibe io.
Tanora eoropeàna telo no nanomboka azy, Astrid, Nadia ary Carmen, voalohany indrindra, ny SlowMov dia teraka tamin'ny endrika bilaogy fanelezana hafatra miabo miresaka fahatsiarovantena, avy eo nivoatra tety anaty tambajotra sôsialy taminà fiteny isankarazany: espaniôla, katalàna, anglisy sy frantsay. Ezahan'ilay hetsika ny ho elanelam-panahy soa sy falifaly mampihavana ireo olompirenena amin'ny hasambarana.
Anaty tontolo milamina sy ahazoana aina no mitombo sy mivelatra ireo hevitra tsara, ny fahaiza-mamorona, ny fifamatorana sôsialy, ny fibanjinana, raha ny fahafahana mamokatra misimisy kokoa takiana ao anatin'ny sehatry ny asa, ny tsy fahandrasana tantana, ny hazakazaka izay azo ambara fa tsy tapaka mameno ny andavanandron'ny olona kosa, mamorona tarehin-javatra tsy ahazoana aina ho an'ny olombelona rehetra izay mamoy mora foana araka izany ny fahatoniany sy ny hasambarana.
“Slow Iphone”, pimaso mampihomehy tao amin'ny trano fisakafoanana an'i Masia Aran avy any Barselôna. Sary an'ny Slow Mov. Nahazoana alàlana
Ny fakàna fotoana hisainana izay hohanina, ny fotoana hankafizana ny sakafo, hitsangantsanganana miaraka amin'ireo retsika 5 miasa tsara, ny fanilihana ny hoe fitaovana fotsiny tsy misy fangaro sy fialàna amin'ny andavanandro feno hazakazaka sy mandrera-tsaina, no mandrafitra ny iray amin'ireo tanjon'ny hetsika slow [miadana] izay teraka any amin'ny firenena marobe amin'izao fotoana izao. Angamba tonga izao ny fotoana hanajanonana ny fitiavana sakafo voakarakara sy aroso anaty fotoana faran'izay haingana (fast-food), sy ireo magazay mivoha amin'ny ora rehetra mandritra ny andro, na ny faniriana ny ho voalohany nandray ny fiara fitaterana iraisana.
Sary an'ny hetsika SlowMov, nahazoana alàlana tamin'ny mpanoratra.
Manasa anao ny SlowMov hiditra aminà fomba fanao tena hafa tanteraka noho ireo voalaza. Mitondra fanohanana izy ho an'ireo tetikasa momba ny fiarovana eny an-dalambe, toy ny Slow Ways [arabe milamina / tony] izay manome famerana hafainganam-pandeha eny amin'ireo lalambe migodàna, no sady manome torohevitra ho an'ireo mpandeha mba haka aina tsara sy hankafy ny tontolo rehefa ilaina amin'ilay dia izany. Fanirian'ilay sehatra ny hametraka rafitra iray fanomezana isa sy fanomezana sosokevitra momba ireo tranobe misy “slow-food“, ary hatramin'ireo orinasa izay misaina bebe kokoa ny kalitao fa tsy ny habetsahana fotsiny.
Iza no mbola tsy nahita an'i Charlie Chaplin nihitsoka tao anaty milin'ny ozinina iray? Talanjona tamin'ny mekanika misosa malaky teo ambany masony, tena mariky ny asa mifampitohy, efa naneso sahady ny famokarana tafahoatra takiana amin'ireo mpiasa izy, tao anatin'ilay sarimihetsika “ireo vaninandro maoderina”. Mikasika tarehin-javatra tsy misy valaka amin'izay, tandrovin'ny SlowMov ny hanentana ny saina amin'ny filàna mametraka dingana hafa famokarana azo atao fanolo hijerena kokoa ny maha-olombolona.
Slow Food tao amin'ny foara italiana iray. Loharano : Wikipédia. Nampiasana lisansa Creative Common.
Ankoatry ny fanelezana hafatra mahomby, ireo vehivavy mpamorona io sehatra io dia miasa amin'ny fanokàfana, anaty fotoana antonony, habaka iray ao Barselôna, ka ao amin'izany no hahafahan'ireo mponina manatrika hetsika misy ifandraisany amin'ny filôzôfia “slow”, mandray anjara amin'ireo fampianarana hainahandro sy vakiteny ary hatramin'ny fisotroana kafe, sy ireo karazana hetsika rehetra izay ny fifampizaràna sy ny fanomezana lanja indray ny fotoana, dia manome fomba fanatonana etika kokoa ho an'ny fiarahamonina.
Mba hahatanteraka izany, tambajotram-pifanakalozana sosialy iray, foibe iray hita maso, karazana sosokevitra samihafa ary hatramin'ny fotoana, no taharo tsy maintsy ilaina mba hanomezana dikany hafa ny atao hoe fotoana.
14 ora izayAngletera